Qalabka kuleylka ah ee kuleylka ah ee kuleylka ah ayaa bixiya labo barasho
Kuleylka Central - Qalabka nadaafada
Sababta dhismaha kasta
In barnaamijka kuleylka dhexe baran doontaa dhammaan ku saabsan rakibo of kululaynta. waxaad baran in meel tuubooyinka, waxaad ku baran in ay ku xidhmaan kululeeyaha iyo hiitarka dhismaha. Waxaan aad si madax bannaan u shaqeeyaan. Rakibayo for kuleylka dhexe waa badan doonatay xirfad.
Waxaan bixinnaa tababar kululeynta iyo tuubbo-dhiska xarunta labada dhinac. Barashada labadaba waa isku-darka barashada goobta shaqada iyo barashada dugsiga.
Waxaa sidoo kale lagu siin doonaa maalmaha aad shaqeyneyso.
Tababarkaaga kadib waxaad u soo gudbin kartaa khibrad badan oo loo-shaqeeyahaaga cusub.
Guryaha dhexe iyo kan tuubooyinka ayaa ah shaqooyinka adag. Waxaa jira baahida weyn ee suuqa shaqada iyo mushaharka ayaa sarreeya.
Waxaad baran tababarka kuleylka dhexe Waxa kale oo dhan oo ku saabsan tuubooyinka. Maxaa ilaa uu jiidayo aad gaaska, sida in lagu xiro biyaha iyo tamarta. Waxaan wada doondoonaya shaqo leh hab tuubooyinka ama kuleylka ah.
tababarka kuleylka dhexe iyo biyo qaboojiyaha qaadataa labo ilaa shan sano.
Waxaad bilaabi in kululaynta module ah.
Iyada oo shahaado ah kuleylka dhexe aad hore u xaqiijisatay booskeeda shaqo.
Haddii aad rabto in aad ku takhasusaan ka dibna aad sii qalmi kartaa sida tuubiste.
Qeybaha waxaa aad u doonatay ee suuqa shaqada.
Uma baahnid wax aqoon ah oo gaar ah oo ku saabsan tababarka nadaafadda / kuleylka.
Waxaad la rakibayo ee kuleylka dhexe ama tuubiste shaqeeyaan. Waxa kale oo aad is inay shaqayn karaan.
Tuubooyinka waa xirfad bottleneck ah. Yaa jecel yahay inuu sameeyo shaqada iyo sida xaqiiqada ah waa wanaag shaqo si fiican loo-bixiyo.
Guud ahaan guud ahaan dharbaaxo ayaa jira. Sidaa darteed, waxaa jira shaqo badan. Gaar ahaan shaqooyinka adag ama shaqooyinka khaaska ah waxaa jira tartan kasta oo adag. Sida dhirbaaxada waxaad ku takhasusi kartaa, laakiin sidoo kale waxay ku koraan adigoo dejinaya shirkad aad leedahay.
Qalabka tuubistu, rakibidda iyo dayactirka rakibooyinka tuubooyinka, sida habka kuleylka ama xarumaha nadaafadda. Si taas loo sameeyo, waa inuu bilaabaa inuu si sax ah u qiimeeyo xaaladda oo uu dhagaysto shuruudaha macaamiisha. Meelaynta waxaa ka mid ah qalabka waaweyn iyo nadiifinta qashinka qarsoon. Haddii ay cadeeyaan waxa loo baahan yahay in la sameeyo, Biyo-geliyaha wuxuu xushay qalabka saxda ah iyo qalabka si uu uga caawiyo inay sii wadaan.
Muxuu shaqeeyuhu ku kasbadaa?
Nagala soo xiriir wixii macluumaad dheeri ah
Haddii aad wax bartaan oo shaqada gaaro shahaado aad u hesho shahaado ee waxbarashada dugsiga sare. Waxaan raacaan manhajka waxbarashada sare ee xirfadeed - waxbarashada dugsiga xirfadda.
Waxaad ku sii wadan kartaa waxbarashadaada diblooma. Maskaxda ku hay in daraasad dheeri ahi aanu ahayn hadafka koowaad ee tababbarka xirfadda. Ujeedada tababarka xirfadeedku waa in laguu diyaariyo suuqa shaqada. Marka waxaan taxadar badan siinaynaa aqoonta aad ubaahantahay inaad shaqeyso.
Haddii aad qorsheyneyso inaad sii wadato waxbarashada, fadlan kala hadal macalimiinta PAV. Waxay kugula talin karaan haddii ay tani macno samaynayso. Waxay sidoo kale qiimeyn karaan haddii aad fursad u leedahay inaad ku guuleysato. Hase yeeshee, dhammaantood ... waxay ku siin karaan talooyin iyo kugu hagayaan qorshayaashaada si ay u sii wataan waxbarashada.